डीसीबीएलको सञ्चित नाफा दुई गुणा बढयो | गृहपृष्ठ
Home लगानी डीसीबीएलको सञ्चित नाफा दुई गुणा बढयो
on: १७ पुष २०६६, शुक्रबार ००:०० लगानी
डीसीबीएलको सञ्चित नाफा दुई गुणा बढयो
आव ०६७/६८ मा डीसीबीएल बैङ्कको सञ्चित नाफा दुई गुणाले वृद्धि भएको छ । बैङ्कले प्रकाशित गरेको आव ०६७/६८ को अपरिष्कृत वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार आव ०६६/६७ को तुलनामा उसको सञ्चित नाफा बढेको उल्लेख छ । आव ०६७/६८ को खुद नाफा रू. १२ करोड १९ लाख जगेडा कोषमा सारेपछि सञ्चित नाफा रू. २३ करोड ३९ लाख पुगेको हो ।
समीक्षा अवधिमा बैङ्कको खुद मुनाफा भने २३ प्रतिशतले घटेको छ । बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा ८ प्रतिशतले बढे पनि कर्मचारी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च र सम्भावित नोक्सानबापतको व्यवस्थामा वृद्धि भएपछि खुद नाफा कम भएको हो । बैङ्कको कर्मचारी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च र नोक्सानबापतको व्यवस्था क्रमश: ३३ प्रतिशत, ७७ प्रतिशत र दुई गुणाले बढेको छ । सो अवधिमा बैङ्कको सञ्चालन नाफा रू. ४२ करोड १३ लाख रहेको छ । खुद नाफासँगै बैङ्कको नाफा मार्जिन र सञ्चालन मार्जिनमा पनि ह्रास आएको छ । नाफा मार्जिन शून्य दशमलव ३३ र सञ्चालन मार्जिन शून्य दशमलव ५२ रहेको छ ।
सो अवधिमा बैङ्कको निक्षेप १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ९ अर्ब ३२ करोड २५ लाख पुगेको छ । बैङ्कको विदेशी मुद्रामा भएको निक्षेप दुई गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । यो कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ । बैङ्कले रू. १ अर्ब ७ करोड सापटी लिएको देखिन्छ । बैङ्कमा हाल २३ दशमलव ४० प्रतिशत तरलता अनुपात रहेको छ । बैङ्कले लगानीमा दुई गुणाभन्दा बढी वृद्धि गरेको छ । बैङ्कको रियल इस्टेट कर्जा घटे पनि अधिविकर्ष र आवधिक कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि कर्जा तथा सापटी जम्मा १९ प्रतिशतले बढेको छ । अधिविकर्ष कर्जा ६९ प्रतिशतले बढेर रू. ३ अर्ब ६२ करोड र आवधिक कर्जा ४५ प्रतिशतले रू. १ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । व्यक्तिगत आवास कर्जा सबैभन्दा धेरै ७७ प्रतिशतले घटेर रू. ७ करोड ६६ लाखमा सीमित भएको छ । बैङ्कको अन्य रियल इस्टेट कर्जा २० प्रतिशतले घटेर रू. ८७ करोड १२ लाख र बिजनेश कम्प्लेक्स कर्जा १६ प्रतिशतले घटेर रू. १ अर्ब ४० करोडमा सीमित भएको छ ।
बैङ्कले यस वर्षआवासीय रियल इस्टेट कर्जामा रू. १८ करोड १२ लाख प्रवाह गरेको छ । बैङ्कको आयआर्जनमूलक कम्प्लेक्स कर्जा पनि ४ प्रतिशतले घटेर रू. १३ करोड १ लाखमा सीमित भएको छ । बैङ्कको अन्य कर्जा ११ प्रतिशतले बढेको छ । बैङ्कको कर्जा निक्षेप अनुपात भने ७४ प्रतिशतबाट बढेर ८२ प्रतिशत पुगेको छ । यो राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमाभन्दा केही कम हो । बैङ्कको निष्त्रिmय कर्जा सामान्य घटेको छ । बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६ दशमलव ३५ रहेको छ । बैङ्कको साउन ३२ गते कायम भएको शेयरमूल्य रू. १ सय ४४ का आधारमा मूल्य-आम्दानी अनुपात २२ दशमलव ६७ रहेको छ । बैङ्कको प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय २२ दशमलव १८ रहेको छ ।